Raha toa moa ka ... protestanta kamo : comments » What if ...
Monday, March 8, 2010 - 16:34:45
Ka ny Fjkm mihitsy io mpanao hira fohy io fa ny an’ny Loterana ataony daholo ny andininy rehetra an! samy protestanta ihany anefa!
Monday, March 8, 2010 - 16:53:56
Ary amin’ny hira fanombohana ny fotoana indray, mba lavalava ihany ny ankamaroany fa dia ilay 226 “Tompo ô mba te-hihaona” iny ihany, izay fohy indrindra amin’izy rehetra, no malaza indrindra.
Any aminareo ve efa nandramana ny endrik’ilay litorjia vaovao izay faran’izay fohy iny? Ilay vitaina anaty vavaka iray ny dingana rehetra dia vakiana ny Teny dia alefa ny toriteny?
Friday, March 12, 2010 - 00:37:18
Mety ho fohy noho ny messe katolika raha izany :-P